दशैँ मनाउन बस चढेर घर जाँदै हुनुहुन्छ ? मौन बसौं, झ्याल खुलै राखौं । - Fewa Nepal
दशैँ मनाउन बस चढेर घर जाँदै हुनुहुन्छ ? मौन बसौं, झ्याल खुलै राखौं ।
भौतिक दूरी शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग
काठमाडौँ । सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरी दशैँ मनाउन बस चढेर घर जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यी उपाय अपनाउन नबिर्सिनुहोला। बसभित्र फेससिल्ड र मास्क लगाऔं । मौन बसौं, झ्याल खुलै राखौं ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुन बसभित्र भौतिक दूरी पालनाको सम्भावना न्यून हुने बताउँछन् । ‘बसभित्र सिटको दूरी निकै कम हुन्छ । त्यसैले मास्क लगाउनुपर्छ । मौन रहनुपर्छ’, डा. पुन भन्छन्, ‘झ्याल खुला राख्दा संक्रमणको जोखिम न्यून हुन्छ ।’ नाक र मुखबाट निस्किने छिटा हावामै पनि तैरिन सक्ने भएकाले बसको झ्यालढोका खुलै राख्दा संक्रमणको जोखिम कम हुने डा. पुन बताउँछन् ।
बसभित्र कोचाकोच अवस्थामा बोल्दा थुकका छिटा फैलिन्छन् । झ्याल बन्द राख्दा ती कण बसभित्रै तैरिएर धेरैलाई संक्रमणको जोखिम हुन सक्छ । कोही संक्रमित छ भने उसले दिएको नोटबाटै संक्रमण हुने जोखिम हुन्छ । संक्रमितसँग १५ मिनेट नजिक रहनु पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका लागि पर्याप्त हुने विज्ञ बताउँछन् । संक्रमितले बसभित्र बोल्दा, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने ससाना छिटाले संक्रमण हुन सक्छ । लामो एवं मध्यम दूरीको यात्रामा एयर कन्डिसनर (एसी) नचलाउन विज्ञको सुझाव छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले संक्रमणको सम्भावना हुने आकलन गर्दै फेससिल्ड अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । फेससिल्ड र मास्क लगाउँदा जोखिम कम हुने विज्ञको भनाइ छ । ‘बसहरू स्यानिटाइज गरेका पनि हुँदैनन् । कोचाकोच यात्रा गराउँछन् । अब यात्रु आफै सचेत हुनु जरुरी छ’, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘मास्क र फेससिल्ड लगाउनुपर्छ । साबुनपानीको व्यवस्था नहुने अवस्थामा स्यानिटाइजरको उपयोग गर्नुपर्छ ।’ साभार: अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिक
नेपालमा २४ घण्टामा १७४१ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि
थप २८५६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
लाइन विस्तारसँगै गाउँ झिलिमिली